“ ကားအသစ္ ဝယ္ေတာ့မွာလား တိတ္တိတ္ေနပါ၊ရာထူးတိုးေတာ့မွာလား တိတ္တိတ္ေနပါ ” ( ေကာင္းလြန္းလို႔ဖတ္ၾကည့္ပါ ) - Amawpyay
အိမ္ဝယ္ေတာ့ မွာလား တိတ္တိတ္ေနပါ။ကားအသစ္ ဝယ္ေတာ့ မွာလား တိတ္တိတ္ေနပါ။အိမ္ေထာင္ျပဳေတာ့ မွာလား တိတ္တိတ္ေနပါ။ အပန္းေျဖ ခရီးထြက္ေတာ့ မွာလား၊ တိတ္တိတ္ေနပါ။ ေက်ာင္းတက္ေတာ့ မွာလား တိတ္တိတ္ေနပါ။ ရာထူးတိုးေတာ့ မွာလားတိတ္တိတ္ေနပါ
ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အိပ္မက္ေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ အေကာင္အထည္ ေပၚလုေပၚခင္ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ကိုယ့္အက်ိဳး မလိုလားတဲ့ မိတ္ေဆြတုေတြကို သြားေျပာမိတဲ့ အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာေတြ ပ်က္စီးတတ္ ပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ …. ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆုံးပါ၊ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း အမ်ားစုဟာ သင္အေျခအေန ေကာင္းတာကို ျမင္ခ်င္ၾကေပမယ့္
သူတို႔ထက္ သာသြားမွာကိုေတာ့ ေၾကာက္႐ြံ႕တတ္ၾက ပါတယ္၊ တစ္အူတုံဆင္း မိသားစုေတြမွာေတာင္ လူမသိ၊ သူမသိ မနာလိုမႈ ဆိုတာ ရွိတတ္စၿမဲပါ
“ ကားအသစ် ဝယ် တော့ မှာလား တိတ်တိတ် နေ ပါ၊ ရာထူး တိုးတော့ မှာလား တိတ်တိတ် နေပါ ” ( ကောင်းလွန်းလို့ ဖတ်ကြည့် ပါ )
အိမ်ဝယ်တော့ မှာလား တိတ်တိတ် နေပါ ။ ကားအသစ် ဝယ်တော့ မှာလား တိတ်တိတ်နေပါ။ အိမ် ထောင် ပြု တော့ မှာလား တိတ်တိတ် နေပါ ။
အပန်းဖြေ ခရီးထွက်တော့ မှာလား၊ တိတ်တိတ် နေပါ ။ ကျောင်းတက်တော့ မှာလား တိတ်တိတ် နေပါ ။ ရာထူး တိုး တော့ မှာလား တိတ်တိတ် နေပါ ။
ကျွန် တော် တို့ ရဲ့ အိ ပ်မက် တွေ၊ ရည် မှန်း ချက် တွေ၊ အ ကောင် အ ထည် ပေါ်လု ပေါ်ခင် အချိန် မျိုးမှာ ကိုယ့် အ ကျိုး မလို လား တဲ့ မိတ်ဆွေတုတွေကို သွ ားပြောမိတဲ့ အ တွက် မျှော်လင့် ထား တာ တွေ ပျက်စီး တတ် ပ ါတယ်။
‘မိတ်ဆွေပါ’ ဆို တဲ့ ကိုယ့် ထက် သာ မနာလို သူ တွေ ရဲ့ ကွက် ကျော် ရိုက်မှု၊ ကုလား ဖန်ထို းမှုကြောင့် ရည် မှန်း ချက် အိပ်မက် တွေကို လက် တစ် ကမ်း အလို လောက်မှာ လက်လွှတ် ဆုံ းရှုံး ရ တတ် ပါ တယ်။
ဒါ့ကြောင့် …. ဆိတ် ဆိတ် နေခြင် းသည် သာ အကောင်း ဆုံ းပါ၊ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း အများစု ဟာ သင် အခြေ အနေ ကောင်း တာကို မြင် ချင် ကြပေမယ့်
သူ တို့ ထက် သာ သွား မှာ ကို တော့ ကြောက် ရွံ့တတ် ကြ ပါ တယ်၊ တစ် အူ တုံ ဆင်း မိ သား စု တွေ မှာ တောင် လူ မ သိ၊ သူ မ သိ မ နာ လို မှု ဆို တာ ရှိ တတ် စမြဲပါ